Mogadishu Journal » Dagaal ciidamada dowladda, Itoobiya iyo Al-shabaab ku dhaxmaray deegaannka Qansax-dheere
Mjournal : — Wararka ka imanaya degmada Qansax-dheere ee gobolka Bay ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda, kuwa Itoobiya iyo Al-shabaab uu halkaa ku ka dhacay, kaa oo la sheegay in leysku adeegsaday hub noocaydiisa kala duwan.
Dad dad goob joogayaal ah sheegeen dagaallka xoogiiisa ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Kor-ubood oo u dhow Qansax Dheere, halkaasoo ay weerar ku qaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiya.
Inta la og yahay 7-ruux oo dhinacyadii dagaalamayay ayaa ku dhintay dagaalka, sidoo kalana in ka badan 10 ruux waxaa ka soo gaaray dhaawacyo kala duwan, iyadoo dadka deegaanka ay sheegeen inuu jiro qasaare soo gaaray rayidka.
Deegaannka laga dagaalamay waxaa la sheegay in ay gacana ku hayaan xoogaga Al-Shabaab, iyadoo ciidamada a dowladda iyo kuwa Itoobiya dib ugu laabteen degmada Qansax Dheere.
Dagaalada ka dhacay duleedka Qansax Dheere ayaa ahaa kuwii ugu cuslaa mudooyinkan dhaca, iyadoo isgaarsiinta degmada ay muddo hawada ka maqneyd.
Sidoo kale dagaal u dhaxeeya ciidamada AMISOM iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Yaaqbari-weyne ee Gobolka Shabellaha Hoose, kaasoo aan si dhab ah loo ogeyn qasaaraha uu geystay.